एमाले बैठकमा राजेश हमालको चर्चा : अष्टलक्ष्मीले भनिन्, ‘राजेश रिसाउँछ बा !’ « Naya Page
काठमाडौं : ‘ए हुँदैन ! कमरेड, हुँदै हुँदैन क्या ! राजेश हमाल रिसाउँछ बा !’ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई फिल्मी नायक कति मनपर्दो रहेछ भन्ने यही संवादबाट बुझिहालिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको लागि पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत १६ गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने समय झण्डै झण्डै गुज्रिन लागिसकेको थियो । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
अष्टले यो कुरा त्यहाँका कार्यकर्तालाई सुनाइन् । तर उनीहरुले मानेनन् ।
सिफरिसमा परेकी निमा २०५४ मा वडासदस्य जिलेकी सक्रिय कार्यकर्ता हुन् भने, अर्जुनलाल त केन्द्रीय सदस्य नै भैहाले । देवेन्द्र रिमाल चाहिँ सामान्य समर्थक मात्र हुन् । निर्वाचनको लहर आएपछि पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेका थिए । उनी कुनै पनि कमिटीमा छैनन् ।